Mandà ny sariitatra 'tsy salama' ny mpanara-maso an'i Shina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana China » Mandà ny sariitatra 'tsy salama' ny mpanara-maso an'i Shina
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny fitondram-panjakan'i Shina dia nanentana ireo mpanome tolotra amin'ny Internet mba hampivelatra ny fantsona sy ny faritra ara-pahasalamana ho an'ny fihinanana ankizy sy tanora, hanao ezaka bebe kokoa amin'ny famerana ny votoaty sy ny fanitsiana ny programa ary hanampy amin'ny fananganana tontolon'ny cyber izay mampivoatra ny tanora.
Sariitatra any Sina izay misy teti-dratsy na sary misy herisetra, ra, vetaveta na pôrnôgrafia.
Mpamatsy tolotra Internet hampivelatra ny fantsona sy ny faritra mahasalama amin'ny fihinanana ankizy sy tanora.
Ny mpanome tolotra Internet dia nanentana ny hanampy amin'ny fananganana tontolon'ny cyber izay mahomby amin'ny fitomboan'ny tanora.
Ny fitantanan'ny Radio sy Televiziona nasionaly nasionaly ao Shina dia naneho ny fandavana tanteraka ny sarimiaina izay 'misy teti-dratsy na rakitsary feno herisetra, ra, vetaveta na pôrnôgrafia'.
Ny famantarana mihantona ao anatin'ny Costco dia mampandre ny mpanjifa fa tsy ampy famatsiana izy ireo ny 2 martsa 2020 ao Cypress, CA. (Saripikan'i Jeff Gritchen, Orange County Register / SCNG)
Entanina ireo mpanome tolotra amin'ny Internet fandaharana tranonkala audio-visual mba hamorona, hanafatra ary handefa sary mihetsika izay manasongadina soatoavina tsara sy hampiroborobo ny hatsaram-panahin'ny tena, ny tsara sy ny tsara, hoy ny tompon'andraikitra amin'ny fampielezana sinoa ao amin'ny tranonkalany.
Nanentana ireo mpamatsy tolotra amin'ny Internet ny fitondrana mba hamorona fantsona sy faritra mahasalama amin'ny fihinanana ankizy sy tanora, hanao ezaka bebe kokoa amin'ny famerana ny atiny sy ny fanatsarana ny programa ary hanampy amin'ny fananganana tontolon'ny cyber izay mitombo amin'ny fitomboan'ny tanora.
The Fitantanana ny Radio sy Televiziona Nasionalyn, teo aloha ny Fitantanan-draharaham-pirenena amin'ny Radio, Sarimihetsika ary Televiziona ary ny Fitantanan-gazety, Famoahana, Radio, Sarimihetsika ary Televiziona, dia maso ivoho eo amin'ny sehatry ny minisitera eo ambany fiadidian'ny State of the People's Republic of Shina.
Ny asany lehibe indrindra dia ny fitantanana sy fanaraha-maso ireo orinasam-panjakana misehatra amin'ny sehatry ny fahitalavitra sy radio.
Ny National Radio and Television Administration dia mifehy mivantana ireo orinasam-panjakana eo amin'ny sehatra nasionaly toa ny Television China Central, China National Radio, ary China Radio International, ary koa ireo studio sy sary mihetsika amin'ny fahitalavitra sy orinasa hafa tsy miankina amin'ny fanjakana.